Snn Nepal जसपाको ‘दोधारे’ निर्णय ! कसले देला ओलीलाई भोट ? – Snn Nepal
काठमाडौ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले प्रतिनिधिसभामा हुने मतदानमा ह्विप नलगाउने र आफ्ना सांसदहरुलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले यसलाई दोधारे एवं ‘दहीचिउरे’ निर्णय भनेका छन् । कसैले चाहिँ ‘केपी ओलीलाई बहुमत पु¥याउन बाटो खुलेको’ टिप्पणी गरेका छन् ।
आखिर जसपाले गरेको यो निर्णयको अन्तर्य के हो रु के पार्टीले आफ्ना सांसदहरुलाई जता पनि मतदान गर्न छुट दिएकै हो त रु केपी ओलीलाई पनि मतदान गर्न पाइने हो रु
आइतबार अपरान्ह आफ्नै निवासमा बसेको जसपा पदाधिकारी बैठकको निर्णयको व्याख्या गर्दै संघीय परिषद अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईले भनेका छन्, ‘जसपाको पदाधिकारी बैठकले पार्टी एकता कायम राख्दै ओली सरकारको बहिर्गमन सुनिश्चित गर्ने कार्यनीति तय गरेको छ । सबैले आ–आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर प्रतिगमनको केन्द्र बनेको ओली सरकारलाई विदा गर्न, देशलाई अग्रगामी निकास दिन र जसपालाई देशको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा विकास गर्न योगदान गरौं ।’
डा। भट्टराईको भनाइअनुसार जसपा बैठकले तय गरेको कार्यनीति भनेको केपी ओलीको बहिर्गमनलाई सुनिश्चित गर्ने हो । यसको अर्थ उनको विपक्षमा मतदान गर्ने वा तटस्थ बस्ने हो तर, ओलीलाई भोट हाल्ने होइन ।
केपी ओलीको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान चलाउँदै हिँडेका महन्थ ठाकुरले नै तटस्थ बस्ने भनिसकेपछि अब जसपाको कुन चाँहि सांसदले केपी ओलीलाई मतदान गर्ला रु योचाहिँ हेर्न लायक विषय बनेको छ ।